आइन्स्टाइनले गरेका कामहरुको बारेमा हरेक कुरा जान्नु भन्दा पहिले उनको बारेमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु जान्नु पर्नेहुन्छ ।
यहाँ यदि हामी कुनैपनि विषय विशेष रूपले उल्लेख गर्ने गरिएको छ। आजको युग विज्ञानको युग हो । यस धरतीमा कैयौं सारा विज्ञानहरु मौजूद रहेका छन् । चारैतर्फ विज्ञान केवल विज्ञानको नै चर्चा छ । आज हामी जुन विज्ञानको गुण-गान गरिरहेका छौं । यसको कारण के होला ? यसको गहिराईमा सोच्ने हो भने के हो त विज्ञान ?
अल्बर्ट आइन्स्टाइन, आजका सबैभन्दा ठूला वैज्ञानिकहरुमध्येको एक हुन् । यिनको पूरा जिन्दगी र यससँग जोडिएको एक कुरासँग जोडिएको को जीवनलाई हेर्ने हो भने यो प्रस‌ंग सबैकालागि रोचक लाग्न सक्छ ।
आइन्स्टाइनको जीवनको संक्षिप्त जानकारी
यहाँ आइन्सटाइनको जीवनीलाई तीन हिस्सामा बाँडिएको छ । पहिलो हो उनको प्रारम्भिक जीवनी, दोस्रो उनको पढाईको बारेमा (छात्र जीवन) र तेस्रो उनको अन्तिम जीवनकाल ।
प्रारम्भिक जीवनी र स्कूल :-
जस्तो कि कुनैपनि महान व्यक्तिको जन्म एक महान स्थानमा हुन्छ । ठीक यसै गरी आइन्सटाइनको जन्म १४ मार्च सन् १८७९ को जर्मन साम्राज्यमा भएको थियो । सो समय पूरै विश्वमा जर्मन साम्राज्यको वर्चस्व चरम सीमामा थियो । उनको पिताजी उस समय एक डाइरेक्ट करेन्टको उपकरणको पसल चलाएका थिए । आइन्सटाइन पछि मुनिच आएर आफ्नो दश औंसम्मको पढाई पूरा गरेका छन् ।
पछि आफ्नो परिवारका साथ इटलीको स्थानान्तरित भएका थिए । सानैदेखि उनको विज्ञान र गणितमा एकदमै रुचि थियो । हरेक कुनैपनि साधारण व्यक्तिको रुपमा उनी समेत जीवनको कैयौं सारा परीक्षामा असफल रहेका थिए । परन्तु निरन्तर पढ्नेको चाहनाका कारण उनको बैज्ञानिक बन्ने सपना पूरा भएको छ। सन् १८९६ मा आइन्सटाइनले आफ्नो १२ औं कक्षा स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका थिए |
जब सन् १९०० मा आइन्सटाइनले स्नातक पूरा गरेका थिए । तब, उनको स्वीस प्याटेन्ट अफिसमा स्थायी जागिर मिलेको थियो । पहिलो पटक भेट अन्तरिक्ष र प्रकाश जस्ता विषयसँग भएको छ । पछि उनको एक महान वैज्ञानिक बनाउनेवाला छन् ।
उनको छात्र जीवन र उनको शोध :-
सन १९०८ सम्म उनी एक विरल वैज्ञानिकको रुपमा समाजमा प्रतिस्ठत भइसकेको थियो । यसका अलावा उनी एक मेधावी छात्र समेत बनिसकेको थियो । उनको यसै कारणले १९०९ मा भौतिक विज्ञानको विशेष अध्यापकको रुपमा वर्न युनिभर्सिटीमा नियुक्त गरिएको छ । पछि १९१३ मा उनलाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक म्याक्स प्लान्कका साथ काम गर्ने मौका मिलेको छ।
उनीसँग भेट्न भन्दा पहिले आइन्सटाइनले १९११ मा सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तको खोज गरेको छ । यहाँदेखि आइन्सटाइनको सफलताको कहानी शुरू हुन्छ । कैयौं सारा वैज्ञानिकहरुद्वारा स्याबासी पाउनको लागि पछि, उनले आफ्नो पूरा ध्यान भौतिक विज्ञानमा केन्द्रित गरेको छ । सन् १९२१ मा उनको भौतिक विज्ञानमा फोटो इलेक्ट्रोनिक इफेक्टमाथि अभूतपूर्व कामका लागि नोबल पुरस्कारसँग सम्मानित गरिएको छ।
उनको बाँकी अध्ययन काल द्वितीय विश्व युद्धको कारण अमेरिकामा नै गुजरेका छन् । उनले १९४० अमेरिकाका नागरिकताले लिएको छ । यससँगै केवल जर्मनीले आफ्ना एक विरल वैज्ञानिक मात्रै हराएन । अमेरिकाको एक विशेष र भविष्यवादी वैज्ञानिक समेत थिए ।
आइन्सटाइन जीवनको आखिरी समय :-
कुनैपनि आम मानिसको रुपमा आइन्सटाइन समेत रोगसँग आफ्नो आखिरी जीवन कालमा धेरै कष्ट झेल्नु पर्यो । उनी शरीरमा पहिले पनि कैयौं सारा अपरेशन गरिएको छ । तर, उनले आफ्नो अन्तिम पलमा अपरेशन गर्नको लागि इन्कार गर्दिएका थिए।
उनी भन्थे कि, ”कृतिम जीवनमा उनले मज्जा लिएरै विताए । जुन प्राकृतिक जीवनमा हुन्छ ।” १७ अप्रिल १९५५ यो त्यस्तो थियो । जब विज्ञानले आफ्नो एक अमूल्य रत्नलाई सधै‌को लागि गुमाउनु पर्यो । एब्डोमिनल औरटिक एनौरिजमका कारण उनको मृत्यु भयो । यसपछि जब उनलाई अटोप्सीको लागि लिएर गएका थिए। त्यतिबेला उनको त्यस समय सर्जरी गरिएको भए उनलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।
आइन्सटाइनको तीन प्रमुख खोज
आइन्सटाइनले विज्ञानमा धेरै महत्वपूर्ण खोज गरेका छन् । तर, त्यसमध्ये निम्न प्रमुख खोजहरु मुख्य छन् ।
१.दुनियाँको सबै महान समीकरणको खोज :-
दुनियाँका सबैभन्दा जटिल समीकरण र शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो समिकरण
दुनियाँका सबैभन्दा अद्भुत र रहस्यमयी समीकरण हो । E=mc^2 । धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ यो कसले बनाएका थिए ? यस समीकरणका लागि सबैभन्दा सजिलो भाषामा भन्ने हो भने (m) द्रव्य मान र (c) को अर्थ शक्ति हुन्छ। आपसमा एक दोस्राका साथ विनिमय गर्न सकिन्छ । यसको मतलब एक दोस्रोको साथ बदल्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा यदि तपाईं एक छोटो सुईमा रहेको हर एक एटोमलाई ऊर्जामा परिणत गरिन्छ भने यो एक सानो सुई हिरोसिमामा गिराएका थिए । एटोमिक बमभन्दा पनि ज्यादा समस्याग्रस्त बनाइदियो ।
२. सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त
अन्तरिक्षमा आइन्सटाइनको सबैभन्दा बढी खोजी यही सिद्धान्त हो । जसले आइन्सटाइनलाई महान बैज्ञानिक बनाउन ठूलो मद्दत पुर्याएको पाइन्छ । अब यहाँ सवाल उठ्न सक्छ कि आखिर यो सिद्धान्त हो के ? यस सिद्धान्तको के हो मतलब ?
विशेष सापेक्षता प्रकाशको गतिमा आधारित एक सिद्धान्त हो । जसमा भनिएको छ कि हामीले सधैंभरी प्रकाशलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको छ। प्रकाशको गति शून्यमा समेत उति नै रहन्छ । जति माध्यमहरुमा रहेको हुन्छ । यहाँ प्रकाशलाई देख्ने व्यक्तिको माध्यमबाट प्रकाशलाई कुनैपनि फरक पर्नेवाला छैन ।
एकदमै ठूला आकाशीय पिण्ड, अन्तरिक्षमा बहनेवाला समयको चक्रलाई विश्रृङ्खलित गर्न सक्दछ । यसको उदाहरणको रुपमा हामी ब्ल्याक होललाई लिन सक्दछौं ।
आइन्सटाइनसँग जोडिएका रोचक कुराहरु :-
१. एकदमै लामो समयपछि बोल्न सिकेका
आइन्टाइन सानै उमेरदेखि एकदमै ढिलो सिक्ने स्वभावका थिए । त्यस्तो भन्दा हामीलाई यसको सच्चाइबारे विश्वास नलाग्न सक्छ । उनले आफ्नो जीवनको पहिलो शब्द नै ३ वर्षको उमेरमा सिकेका थिए ।
२. कम्पाससँको प्यार
किन थियो उनको कम्पाससँग प्यार ? आखिर एक भौतिक वैज्ञानिकको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हुनसक्छ? सायद एक कम्पास । आइन्सटाइनको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा कम्पास थियो । जब उनी ५ वर्षका थिए । उनका पिताले उनको एक कम्पास देखाइएका थिए । देखेपछि उनको प्यार कम्पाससँग जोडिएको थियो ।
३. भाइलन बजाउन उनको पहिलो रोजाई
उनकी आमा एक राम्रो कलाकार (संगीतकार) थिए । यसका लागि उनी सधैं चाहिन्थिन् कि उनका छोरा समेत संगीत सिकोस् । पहिले पहिले आइन्सटाइनको संगीत रोजाईमा थियो । १४ वर्षदेखि एकाएक उनलाई संगीतसँग प्रेम हुन लाग्यो । संगीतको लागि उनले भाइलन चिनिन् ।
४. राष्ट्रपति बन्न सक्थे आइन्सटाइन
इजरायलका प्रथम राष्ट्रपति चेम वेजमनको मृत्युपछि आइन्सटाइनलाई इजरायलका राष्ट्रपति बन्ने मौका मिलेको थियो । तर, आइन्सटाइनले त्यसकोलागि इन्कार गरिदिए । त्यसपछि उनी आफैं शोध कार्यमा लागे
५. तैरिन आउने थिएन उनलाई
उनी यस्ता व्यक्ति थिए कि जसलाई तैरिन आउँदैन । यसका लागि उनको कुनैपनि मनमा यसको लागि एकदमै दुखको महसूस हुन्छ। तर, परन्तु उनको साथीहरुलाई समेत तैरिन आउने थिएन । यत्ति बुद्धिमान व्यक्ति हुनुका बाबजुद उनलाई कहिलै पनि तैरिन सिकेनन् । यहाँ समेत कि उनलाई नाउ चलाउन एकदमै धेरै शोख थियो ।